Kaniisadda: Wada shaqayn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaniisadda: Wada shaqayn
Publicerat torsdag 16 mars kl 10.17
Dhisme ka mid ah xarrumaha cibaadada kaniisadaha ee dalka Sweden. Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold
Kaniisadda Sweden ayaa soo saartay qiimayn ay dib ugu eegayso doorkii ay kaniisaduhu ka qaateen howlaha arrimaha qaxootiga sannadihii 2015-2016kii.
Warbixin arrintan ku aaddan ayay maanta kaniisaddu ku eegtay waxqabadkii ay ka geysatay adeegyadii loo qabanayay dadka magangelyadoonka ee waddanka imanayay labadii sano ee u dambaysay.
Warbixintan ayay kaniisaddu ku sheegtay in ku dhowaad 40 000 oo qof ay howlaha caawinaadda soo galootiga ka qyb qaadanayeen iyadoo 8000 oo dadkaasi ka mid ahaana ay ahaayeen dad iyagu iskood u shaqaynayay.
-Erika Brundin oo ah xoghayaha guud ee kaniisadda oo ka hadlaysa doorka ay kaniisaddu ka gaysatay howlaha caawinaadda dadka soo galootiga ah ayaa sheegtay inaanay wax sahlan ahayn in kaniisadda iyo laamaha kale ee dowladdu ay wada shaqayn wanaaagsan arrinkan ka yeeshaan.
Sidoo kale Inger Awerlöf oo ah isu duwahaha kniisadda u qaabilsan howlaha soo galootiga ayaa sheegtay in kaniisaddu door weyn ka ciyaartay howlaha caawinaadda dadka soo galootiga ah, iyadoo tusaale usoo qaaadatay magaalada Borås, waxay sheegtay in dadka lagu caawinayay iyada oo dhar loo qaybiyay iyo weliba meelo ay isugu yimaadaan si ay af- iswiidhishka ugu bartaan.
Si kastaba ha ahaate waxa ay kaniisaddu warbixintan ku sheegtay inay xaaladdu aad u adkaan lahayd haddii aanay bulshada rayadka ah iyo kaniisaduhu arrinta xil iska saarin.